Lymph node kuyingxenye ebalulekile kohlelo lymph lomuntu owenza njengendlela lemifanekiso. Lapho umzimba etheleleka, zonke izakhi trace, sithwele umonakalo, kuthiwa imali engeyokuqala lymph, bese libhujiswa amangqamuzana amhlophe egazi. Kukhona amacala lapho ukutheleleka iphikelela kakhulu, ngokuqondene lapho amangqamuzana amhlophe ocushiwe, okuholela ukuvuvukala obengeziwe-lymph. Ngakho-ke, lapho avuvukele lymph node, kuba okokuqala kudingekile ukuba asiqede lesi sifo. Lymph node uhlale "laliqapha" ngesikhathi nempilo yabantu kanye kutshela sokuhlasela kwamagciwane, eziwuhlupho bese amagciwane.
Njengoba yaziwa, zingavuvukalanga lymph node - lokhu iyisici kubuhlungu ngempela uvame ukuhambisana ubuhlungu. Igama elithi zokwelapha ezisetshenziswayo ukuchaza inkinga - lymphadenitis. Ngeshwa, ukuvuvukala lymph node ezihambisana yizifo ngezifo ukuvuvukala futhi izinqubo zomzimba. Ngakho-ke, ukwelashwa yayo ikakhulu kuxhomeke isifo namandla aso.
Kulesi sihloko sizogxila ukuvuvukala ama-lymph node ngaphansi emakhwapheni. Uma ISIZINDA lymph ngaphansi emakhwapheni yanda, umuntu ngokuyinhloko kufanele uphenywa udokotela ebukhoneni yisiphi isifo. On, udokotela ukuhlonza izimbangela ukuthi kwabangela ukuvuvukala-lymph. Futhi zingase zihluke kakhulu izizathu lokhu. Kuyinto isifo sezicubu zezinzwa, hypersensitivity somzimba, umdlavuza, isifo webele, izifo ezibangelwa amagciwane kanye ezibangelwa amagciwane okungamahlalakhona, ngisho nomdlavuza.
Uma umuntu angabi nomuzwa-lymph, kusho ukuthi kulungile nezempilo. Uma ama-lymph node ngaphansi emakhwapheni is abavusa ke isifo siqhubeka. Kulokhu, ubuhlungu esiyitholayo, futhi okungase kuthintwe ezihambayo nxazonke iqhubu ngesikhathi ukuphokophela endaweni underarm, ukunyakaza ngokushesha izandla. Ngokuba izimpawu muntu uzokwazi ngokuzimela ukunquma ukuthi izindawo ezithile kuba i avuvukele lymph node. Uma obukhulu zamanzi ngaphansi emakhwapheni, futhi ukuvuvukala uqalile, kusho ukuthi kuzomele uqale ukuba izitho ihlolwe itholakala kule ndawo, khona izifo ezithile.
Lapho izinga lokushisa luyanda, kukhona umkhuhlane, ubuhlungu okuncane noma kabi ekhanda, ngesikhathi ISIZINDA ikhwapha lymph kukhona lakhulisiwe, kufanele sifune iseluleko udokotela. ukwelashwa lymphadenitis iqala neqiniso ukuthi kuvela isizathu ivela khona. Futhi kulokhu iphathwa isifo, okwaholela ukwanda engeyokuqala lymph. Kodwa uma isizathu ayikwazanga ukuthola, khona-ke kufanele uqale ukwelashwa isayithi.
Uma ama-lymph node ngaphansi emakhwapheni is abavusa, kodwa ingcindezi kubo akukho ubuhlungu, ungazama ukwelashwa nge izindlela abantu. Eyodwa yezindlela eziphumelela kakhulu - ethola infusions of Echinacea. Its ebezidinga buhlanjululwe ngamanzi (amagremu 100 10 amanzi Echinacea) futhi kuthathwe ngomlomo kathathu ngosuku. Lokhu kuwukhulula ukuvuvukala kunciphisa ubukhulu node-lymph.
Futhi, isiraphu Yenziwe Echinacea ngokuyisimangaliso. Ngenxa yalesi kubalulekile ubilise amanzi (1.5 izinkomishi), bese ungeza 4 wezipuni impande nengulube of Echinacea, ubilise phezu emlilweni ophansi imizuzu 20 ngemva kwalokho 50 amagremu peppermint, nika infusions imizuzu 5, engeza uju ukunambitha. Lokhu isiraphu ziphele kathathu ngosuku ukuze 20 amagremu.
Ungakwazi namanje thatha powder kusuka ochotshoziwe goldenseal Canadian. I powder ziphele kwengxenye isipuni kathathu ngosuku, ukugeza phansi ngamanzi.
Futhi, uma ama-lymph node ngaphansi emakhwapheni is abavusa, sebenzisa ukulibopha efudumele, okuyinto ukwehlisa ukushisa, futhi uma kudingeka, i-antibiotic lenikiwe. Ngesikhathi esifanayo sidinga ukuphumula okuhle. Futhi ungakhohlwa ukuthi, ngaphambi kokufaka isicelo noma iyiphi inqubo yokwelapha, ngaso sonke isikhathi kufanele uthintane nge onguchwepheshe.
Ewing sika Sarcoma: izimpawu, onalesi sifo, ukwelashwa
Klebsiella - ukwelashwa akuvamile kusiza
Melancholia - isimo sengqondo noma senhliziyo?
Onesimo endaweni suburban ukuze athole induduzo
Beach "Flagman" (Pirogovo): ezokungcebeleka, amanani, ukubuyekezwa, kanjani ukuze uthole